जसपामा डा.बाबुराम भट्टराई ‘१ नम्बर’ अध्यक्ष ! – bampijhyala.com
Home > समाचार > राजनिती > जसपामा डा.बाबुराम भट्टराई ‘१ नम्बर’ अध्यक्ष !
४ कार्तिक २०७७, मंगलवार १९:२० bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद्को अध्यक्षमा डा.बाबुराम भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएको छ । कार्यकारिणी समितिको बैठकले सो जिम्मेवारी दिएको सो समितिका नेता मनिष सुमनले बताए ।
त्यसैगरी, ७७९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको पनि घोषणा गरेको छ । यसअघि ७०१ सदस्यीय कार्यसमिति प्रावधान थियो तर केन्द्रीय सदस्यहरुको आकाँक्षी बढेपछि विधान संशोधन गरेर सङ्ख्या बढाएर ८०१ सदस्यीय गरेको छ । दुईजना पछि मनोनित गर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरि विभिन्न विभाग र आयोगमा कार्यविभाजन पनि गरेको छ । २९ वटा विभाग बनेको छ ।
दोलखा जिल्लामा ११ जना कोरोना संक्रमण मुक्त, जिल्लामा भेरोसिल पहिलो डोजको खोप २ हजार ६ शय ६९ जनालाई ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार १९:२०
१ हजार ६८१ थपिए, ४ हजार १८७ कोरोनामुक्त, ४१ को मृत्यु ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार १९:२०
नेपाल भाषाय ब्वन्केईरीय माग यङन ज्ञापन पती ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार १९:२०
सर्वोच्चले आदेश फिर्ता लियो ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार १९:२०
कंगनाको पासपोर्ट नविकरण गर्न विभागले नमानेपछी अदालत पुगिन् ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार १९:२०